The Best Places For Harry Potter Weekend In London | Save A Train
musha > Travel Europe > The Best Places For Harry Potter Weekend In London
Harry Potter mafirimu vaiva vakawanda vanobudirira firimu dzinotevedzana nguva dzose. Vakawanda mifananidzo kubva Harry Potter mafirimu vakapfurwa mukati London pachayo. Kunyangwe iwe uri fan-yakaoma fan yeiyo Harry Potter bhaisikopo kana bhuku akateedzana, London zvechokwadi ndiyo nzvimbo yakanakisisa kushanyira ive yechokwadi Harry Potter ruzivo. Unoda kuziva chii 5 Places kuzoshanyira nokuda kwenyu Harry Potter Weekend muLondon? Save A Train akaita akaanyora aya kuti wizarding kwako uchinzvera ane nyore uye zvinonakidza mumwe!
Izvi ndiye ruzivo mumabhuku edu! Ona wokutanga ruoko rinovira, zvokupfeka, uye zvokushandisa anoshandiswa ose Harry Potter mafirimu! Danho mukati vamwe nzvimbo firimu kusanganisira; The Great Hall, Dumbledore hofisi, uye Hagrid hut.
Where kuwana ichi? musoro pamusoro kune Warner Bros. Studios Tour London. The Making of Harry Potter ari paruzhinji kukwezvana muna Leavesden kwakadziva kumabvazuva England. Kwete yekusavhiringidzwa neiyo Wizarding Nyika yaHarry Potter weUniversal Studios theme parks. Zviri zvachose zviratidzwa kupa rechokwadi seri noruzhinji nzwisa Harry Potter mafirimu. Iva mashiripiti zuva kubva aine seri noruzhinji uchimuratidza Harry Potter mafirimu pa Warner Bros. Studio Tour London.
2. Harry Potter Weekend: Anobatirira Vamwe Merch At Platform 9 3/4
Kings Cross Station ndiye, ehe saizvozvo, achinyora pfungwa yokuti vadzidzi Hogwarts School zvouroyi uye Wizardry, izvo ayo yakakurumbira mudzidzi, Harry Potter, inopinda. The Hogwarts Express ngaubve Platform 9 ¾.
Mukati Kings Cross Station, chikuru chiteshi chechitima muLondon nokuti nezvitima kuna Edinburgh uye Scotland, munhu mushanyi kukwezvwa hwakagadzwa, aine mukwende trolley hafu midzi parusvingo, apo unogona kuzodzosera rokunyora yako Harry Potter nguva.
Kuti aponese kuzara pamwe pamwe nekurutsa vanhu, uyu ikozvino kuti kuwanikwa huru horo kunharaunda Kings Cross chiteshi, kwete pakati platforms 9 uye 10 sezvo ungafunga.
Pakati pemaawa e 9 am uye 9 pm unogona kubhadhara kuva nyanzvi mifananidzo uye mubatsiri akubatsire kuwana zvakanakisisa zvinobvira Photo, zadza nekaharari kaHarry Potter uye / kana wand. achiri Unogona kutora pachako Photo wako pano mahara.
Kana unogona chete kushanyira panguva yepamusorosoro nguva uye vane mari kupembedza, iwe unogona kuda kufunga nezve kutenga VIP Photo Pass lanyard. Izvi zvinosanganisira chikuva 9 ¾ lanyard, mufananidzo wako, uye mutsara unosvetuka, zvose nokuda £ 20.
The chiteshi zvino kumba kuti Harry Potter chitoro anonzi Platform 9 3/4 apo uchaona zvose wizarding zvako. Unogona kunyange kutenga munhu zvichienderana Hogwarts tsamba pano nokuda £ 15 kana kunyange munhu zvichienderana Hogwarts hunde kuti £ 65!
Calais kuLondon Zvitima
3. Stay: The Wizard Chamber At The Georgian House Hotel
nzvimbo imwe neimwe Features yakasvibiswa mahwindo girazi, ibwe masvingo, uye mana posita mibhedha, apo pehuni dzinenge Stoves, cauldrons, uye machira kupedza enchanting mufananidzo uyu London hotera. It anosimbiswa unzwe mashiripiti.
Rinonzi Ghent kuLondon Zvitima
Middelburg kuLondon Zvitima
WeLeiden kuLondon Zvitima
4. Harry Potter Weekend: Iva A Drink At The mugate
Chii Harry Potter Weekend muLondon pasina kuedza munhu mugate? This Magical Cocktail Experience chinhu 1 hr 45 Maminitsi kirasi immersive mu London. Don nguvo dzako, tora mawoko ako, uye gadzirira kirasi yako yePotions ine mweya zvakadaro, iyi Immersive Magical Cocktail Experience nokuda Two pa The mugate, London.
Panzvimbo yako yekudyidzana, muchawana kuidza kubuda mashiripiti wako wand nokudurura munhu welcome drink. Uchabva kushandisa samolecular mixology unyanzvi yokubika wako zvinonaka elixirs, imwe neimwe achava unhu hwakasiyana uye zvinokonzerwa. Gadzirirai kusanganisa dzimwe mashiripiti dzakawanda enchanting coctail ruzivo London kwakaita!
1 awa 45 mineti immersive mashiripiti coctail ruzivo maviri pa The mugate, London
Kushanda mashiripiti wands uye nguvo akapa
Gadzira zvinwiwa matatu kushandisa samolecular mixology
Doro-isina, gluten, uye vegan sarudzo dzese dzinowanikwa
Experience chipo rongedza kusanganisira munhu zvichienderana vhocha uye mashoko kadhi
Den Helder kuLondon Zvitima
Bonn kuLondon Zvitima
5. Ona zvinotyisa From The Books And Movies On A Muggle Walking Tour
The 2.5 awa Muggle Walking Tour anofukidza vazhinji London varipo anotaurwa mumabhuku, kusanganisira Number 12 Grimmauld Place uye Bazi Magic. Uchanzwawo kushanyira migwagwa uye alleys dzaiva kufemera dzakawanda akatevedzana nzvimbo dzakadai; Diagon mukoto uye Knockturn mukoto. zvisinei, tinoda kuti rwokuparidza ichi hachisi noruzivo. Inopawo tinzwisise zvimwe nhoroondo nzvimbo iwe achapfuura munzira.
Düsseldorf kuLondon Zvitima
Essen kuLondon Zvitima
MuMünster kuLondon Zvitima
Leuven kuLondon Zvitima
Unonzwa akafuridzirwa kuti kusika yako remashiripiti iwe kumativi London? Shandisa edu mazita 5 Places kuzoshanyira nokuda kwenyu Harry Potter Weekend muLondon, ikozvino. Book tikiti renyu mumaminitsi achibatsirwa Save A Train!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Places To Visit For Your Harry Potter Weekend In London” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fharry-potter-weekend-london%2F%3Flang%3Dsn– (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#HarryPotter ushingi europetravel HarryPotterfilms London travelbytrain muuki